Ukukhetha uhlobo olufanele lweDredge - ama-Ellicott dredges
Ukukhetha uhlobo olufanele lweDredge
Yikuphi Ukudonswa Usayizi Engizodinga?
Njengomuntu ongaba ngumnikazi we-dredge, mhlawumbe unelukuluku lokwazi ukuthi ngubuphi ubukhulu be-dredge ozoyidinga ukuqedela iphrojekthi yakho. Impendulo incike ezintweni eziningana, njengezimo zemvelo nemininingwane yephrojekthi. Ukuba nombono wephrojekthi noma uhlobo lwamaphrojekthi ohlela ukuwaqedela kuzosiza ukunquma uhlobo lwe- imishini yokudonsa ehlangabezana nezidingo zakho.
Lapho kuhlaziywa ukuklanywa kabusha nangaphambi kokuthengwa, osonkontileka, izinhlangano zabanini bamakhaya, omasipala, kanye nabanikazi basolwandle, kufanele bacabangele:
IVolumu yezinto ezibonakalayo ezokwehliswa
Indlela efanele yokulahla
Yehlisa ukujula nebanga lokupompa endaweni yokulahla
Izinga lokungcola lokudlengwa nokukhiqizwa okuphelele
Isondlo, izindleko zokugcina, iholo, imihlomulo, umshuwalense, izimvume zokudonswa kwempahla, neminye imishini yokulekelela uma ingasebenzi.
Akunandaba ukuthi hlobo luni lwephrojekthi, ukwakhiwa kabusha kungumsebenzi oyinselele futhi uyinkimbinkimbi. Indlela yokusiza ekwehliseni inani lokungaqiniseki ngaphambili ukusebenza nomakhi owaziwayo wedrediyo onentshisekelo yokukusiza ukhethe uhlobo olufanele lokwehla okwenzelwe uhlelo lwakho oluthile lokwehla.
Ama-Hopper dredges yimikhumbi yolwandle ezizimele eyenzelwe ukuqoqa inzika kusetshenziswa izingalo ezihudulayo ezihamba eceleni kwedredge engezansi komgwaqo wamanzi. Lapho izinto seziqoqiwe, zigcinwa ngaphakathi “esiswini” salo dredge, okubizwa ngokuthi yi-hopper. I-sediment ebanjiwe iyathuthwa lapho i-dredge iya endaweni yokubekwa noma indawo yokulahla. Izindlela ezimbili ezithandwayo zokukhishwa zalolu hlobo lwamanzi zifaka: futhi 1) Ukumpompa isihlabathi ogwini usebenzisa ipompo eseceleni oHopper dredges ajwayele ukusetshenziselwa ukwakha iziqhingi, ukwemba izilwandle ezijulile, ukufaka izicelo kwamanzi avulekile, nokwakha amachweba amakhulu. Ama-Hopper dredges ajwayele ukuba nobunzima ekusebenzeni ezindaweni ezingajulile, embiwa ngokunemba okuncane kunezinye izinhlobo zamanzi, futhi kubiza kakhulu ukuthenga nokulungisa.
Ukubanjwa “kweMcFarland” Hopper - iMississippi Southwest Passage
Ama-Auger dredges asebenzisa isikebhe esimise okwe-isikulufu se-Archimedes futhi asebenze ngokusebenzisa izintambo nokuma kwepully. Zisetshenziselwa ukususa okuqinile okukhethekile nokulungiswa. Ama-Auger dredges kwesinye isikhathi alungele ukusebenza okungenamuntu emachibini nasemachibini wamanzi angcolile lapho ukufinyelela komuntu kungathandeki noma kuyingozi. Le mikhumbi ingasetshenziswa futhi ukwenza imarina, ukubuyiselwa kwechibi, noma amaphrojekthi wamanzi ezolimo. Zonke izinhlelo zenzelwe ukuguquguquka okuphezulu nokuhamba futhi zingenziwa ngezifiso ezinhlelweni ezithile. Ama-Auger dredges asetshenziswa kangcono ekujuleni kwamanzi okusukela phakathi
I-4 ft. (1.2 m) no-30 ft (9 m). Amakhanda amakhulu we-auger dredge awasebenzi kahle ezindaweni eziqukethe ubhaxa olunzima noma oluqinile. Kodwa-ke, le minqingo isebenza kahle ekusetshenzisweni kwamachibi ane-lined ngoba ingahlinzekwa ngamasondo e-auger ukuvikela phansi ekujezisweni.
Ama-Bucketwheel dredges asebenza njenge-cutter suction dredge ku-spud kanye nezinhlelo ze-anchor, ngokuvamisile ukusetshenziswa kwe-spud carriers. Ama-duckges weBucketwheel alungele ukuhlanganiswa kwezimayini nokumba izinto ezinzima kakhulu. I-sandwheel dredge isebenza kahle futhi iqondile, inquma ngokulinganayo kuyo yonke indlela futhi inikezela ukulawulwa okujulile kokujula. Ama-duckges e-Bucketwheel angaba nezintengo ezibiza kakhulu zokuthenga ezingaphambili kunezinhlobo eziningi zasemuva futhi zakhiwe ngaphezulu ukuze zisetshenziselwe ukumba izinto ezinhle zokusanhlamvu.
I-Ellicott B590E Bucketwheel Dredge - eCanada
I-Cutter Suction dredge
I-Cutter Suction dredge isebenzisa isikebhe sokusika ikhanda lebhasikidi ukukhulula izinto okufanele zenziwe futhi ichazwa ububanzi bepayipi lokukhipha idredge. I-cutterhead ejikelezayo yedredge izungeze umugqa wokudonswa kokudweba-ezintweni ezigeleza ngokukhululekile ezingahambisa ukugeleza ketshezi nokuqina kusuka ekugcineni kokumunca ngepompo eceleni kwepayipi lokukhipha kusayithi lokulahla. noma ngqo ogwini lolwandle lapho zisetshenziselwa izinjongo zokubuyiselwa kolwandle noma komhlaba. I-dredge ibanjiswe endaweni ngama-spuds amabili ngemuva kwe-dredge lapho i-cutterhead ibandakanyeka ekudonseni phansi. Abasiki banemisebenzi emibili eyisisekelo:
Mkhulule futhi uhlukanise izinto zokwakha kusuka phansi komgwaqo wamanzi zibe yizicucu ezincane ezihambisana nohlelo lokuphompa dredge.
Faka imfucumfucu eyonakele ungene emfuleni osesimweni esiphakeme lapho kuthathwa khona umthamo obekiwe lapho izinto zizobe zidonswa khona bese zihanjiswa ngohlelo lwamapayipi we-hydraulic dredge.
Ama-cutterheads amancane angaqaqwa abe izingxenye futhi athuthwe kalula. Le mikhumbi ngokwesiko isetshenziselwa ukumba isihlabathi namatshe, ulungiso lwasolwandle nolwandle, ukunakekelwa kwemigwaqo yamanzi, ukujulisa ukuthuthukiswa kweziteshi nokukhulisa, ukugcinwa kwamachweba kanye namaphrojekthi okulungisa imvelo. Ama-cutterhead dredges asebenza ngaphandle kokuphazanyiswa, anikezela ngokulawulwa okuqondile, aguquguqukayo, futhi athathwa njengomsebenzi womkhakha. Ama-cutterhead dredges anokulinganiselwa, kufaka phakathi ubunzima bokusingatha izingcezu ezinkulu nokusebenza ezimweni ezijulile zolwandle.
Uchungechunge lwe-Ellicott 670 Cutter Dragon® Dredge - eGuatemala
Izinto Ongazicabanga Ngaphambi Kokuthenga I-Dredge
Labo abacabanga ukuthenga i-dredge kufanele baqonde:
Uma wehla ngaphezu kwezinyanga eziyisithupha ngonyaka, kungahle kube nengqondo ukuthenga indawo yokuhlala, ukuqeqesha abasebenzi, futhi uqiniseke ukuthi unezinhlelo ezifanele zokusebenza ngaphambi kokuthenga isakhiwo.
Kungaba nzima ukugcina abaqeqeshiwe be-dredge unyaka wonke uma ungasebenzi unyaka wonke.
Buyekeza ukuhweba phakathi kwezindleko zesikhashana esifushane nokutshalwa kwemali kwesikhathi eside.
U-Ellicott Dredges, LLC ungumholi wezwe ekuzinqumeni komgwaqo osikiwe. Izindawo zethu zenzelwe ukuvikela imvelo, sithuthukise futhi silondoloze izindlela zamanzi eziphephile nemithombo yezimayini yokuthuthukisa ezomnotho. Ama-dredges angaphezu kuka-2,000 100 e-Ellicott® anikezwe amazwe angaphezu kwe-XNUMX. Ngeminye imininingwane ngemugqa ka-Ellicott imithambo ye-cutterhead suction dredges, ucingo + 1-410-625-0808, noma ugcwalise i-intanethi yethu umbuzo wemibuzo, futhi othile uzokuthinta kungekudala.
Ulayini Wethu Wefoni Uphansi
Njengamanje sibhekene nenkinga yokunqamuka kocingo. Amakhasimende adinga ukuxhaswa ngokushesha sicela athumele ama-imeyili anezidingo zokuThengiswa kuwo sale@dredge.com noma i-Customer Service & Spare Parts to izingxenye@dredge.com. Siyaxolisa ngokungalungile futhi silangazelela ukukhuluma nawe kungekudala.